Unknown Xiaomi No comments
Xiaomi Devices အားလုံးကို Mi Flash Unlock Tool ဖြင့်
Bootloader Unlock ပြုလုပ်နည်းကို ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီပိုစ့်ကို ရေးချင်နေခဲ့တာ ကြာလှပါပြီ March လလောက်ကတည်းပေါ့
ဆရာတွေ ရေးတင်ကြမလားဆိုပြီးစောင့်နေတာ တစ်ခြား Tool တွေပဲ
ထွက်ရှိလာတယ် ဒီနည်းလမ်းလေးကို ပြန်လည် ရေးကြတာသိပ်မတွေ့မိဘူး
သိတဲ့သူတွေကြတော့လည်း စာရေးရမှာ အချိန်မပေးနိုင်တာနဲ့ မရေးဖြစ်ကြ
တစ်ခြား နည်းပညာ ညီအကိုများ ရေးတင်မလားကြည့်တော့လည်း မပေါ်လာ
ဒီနေ့ Xiaomi Mi Max ဖုန်းအတွက် CM13 ROM ထွက်လာတော့ Custom Rom
တင်နည်းလေးကို ပေးလိုက်ပါဦးမယ် လုပ်ရော့ ဟော...လွယ်တာမှတ်လို့
၁။ Bootloader Unlock ပြုလုပ်ထားရမယ်
၂။ Root access ရရှိထားရမယ်
၃။ Custom Recovery ထည့်သွင်းထားရမယ်။
စတဲ့ Step လေးတွေက ရှိနေပြန်တော့လည်း Xiaomi Devices အားလုံးကို
Mi Flash Unlock Tool ဖြင့် Bootloader Unlock ပြုလုပ်နည်းကို ရေးဦးမယ်လို့
စိတ်ထဲ ထားပြီး အခုချိန်ထိ လူငယ်တွေကြားကို အရောက် မပို့ပေးနိုင်ခဲ့သေးတဲ့
ကျနော့်ရဲ့ ကြိုးစား အားထုတ်မှုကိုပဲ ပြန်လည် အပြစ်မြင်မိတော့တယ်ဗျာ...
ယခု ပိုစ့်ကတော့ ဖုန်းပြုပြင်နည်း ဆိုင်ရာကို လေ့လာလိုက်စားနေကြတဲ့ လေ့လာခါစ
ညီအကိုများအတွက် သိထားသင့်တဲ့ နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
သိပြီးသား ဆရာတွေကတော့ မြင်တာနဲ့ အော်... ဒါလေးများ ဆိုပြီး ပိုစ့်ကို ပြီးအောင်
ဖတ်ဖြစ်မယ်မထင်ပါ... ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် လာရောက် အားပေးကြတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါတယ်။
စမတ်ဖုန်းလောကတွင် မြန်မာနိုင်အတွင်း ဈေးကွက်လောကထဲ နာမည်ကြီး ဖုန်းများနဲ့
နည်းတူ ၀ှုန်းထ လာတဲ့ နာမည်ကြီး Xiaomi Devices အားလုံးကို အသုံးပြုဖူးသူတိုင်း
Xiaomi Devices များ၏ ကောင်းကျိုးများကို အကြိုက်တွေ့ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။
ဒီအတွက်လည်း Xiaomi Devices ဟာ အချိန်ဟုန် အတိုးအတွင်းမှာ အောင်မြင်မှုကို
အမိအရ ဆုတ်ကိုင်နိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်၊ ပြောစရာ မရှိလောက်အောင်
ပြင်ဆင်ပြီးမှ ဈေးကွက်ထဲ တိုးဝင်လာတဲ့ ဒီဖုန်း Brands အတွက် မြန်မာများ ဖြစ်ကြတဲ့
ကျနော့်တွေအတွက်လည်း မြန်မာစာ အမှန်များနဲ့ စတိုင်ရှိရှိ စတာ ဖြစ်ချင်နေကြတာချည်းပါပဲ။
ဒီနေရာမှာ ဖုန်းကို မြန်မာအမှန် အသုံးပြုရရုံဖြင့် မကျေနပ်နိုင်သေးတဲ့ Developer စိတ်ကူးလေး
ယဉ်ကြည့်သူ (သို့) Android System ကို Hack လုပ်ပြီး Super User အဖြစ်ဖြင့် ဖုန်းအတွင်းပိုင်ကို
ကလစ်ကြည့်ချင်တဲ့ လူတွေအတွက်တော့ ဖုန်းကို Bootloader Unlock ပြုလုပ်ကြည့်ချင်တာ
Root Access လည်း ရယူကြည့်ချင်တာ၊ Custom Recovery များထည့်သွင်းကြည့်ချင်တာ။
ပြီးတော့ Custom Rom အလန်းများဖြင့် မြူးတူးကြည့်ချင်တာ ဖြစ်နိုင်ရင် Stock Rom ကို
Full Backup ဆွဲထုတ်ပြီး Read & Write လုပ်ကြည့်ချင်တာ စသည့်ဖြင့် Android System ပိုင်းကို
စမ်းသပ်အသုံးပြုချင်နေကြတဲ့ သူတွေအတွက်ကတော့ Mi Flash Unlock Tool ဖြင့်
Bootloader Unlock ပြုလုပ်နည်းဆိုတာလည်း မသိမဖြစ် သိထားသင့် အရာတစ်ခုဖြစ်လို့နေမှာပါ။
ကိုယ်လေ့လာမိသလောက် ပြန်လည်မျှဝေပေးချင်တဲ့ စိတ်တစ်ခုကြောင့်
ဒီလောကထဲ တိုးဝင်လာမိတဲ့ ကျနော်ကတော့ ကိုယ်နဲ့ထပ်တူ အခွင့်အရေး
မရနိုင်ပဲ မလေ့လာဖြစ်ကြ သင်တန်း မတက်ဖြစ်ကြတဲ့ ညီအကိုများအတွက်
ကိုယ်တတ်နိုင်သလောက် ကြိုးစားပြီး ပြန်လည်မျှဝေပေးသွားဖို့ စိတ်ကူးပြီးသားပါ။
Bootloader Unlock ပြုလုပ်နည်းကို ဖတ်ဖြစ်အောင် ဖတ်ထားပါ။
ပြီးရင် စာအုပ်လေးကို သိမ်းထားပါ၊ တွဲတင်ပေးလိုက်တဲ့ Video ဖိုင်ကိုလည်း
စာအုပ်လေးနဲ့အတူ Folder လေး တည်ဆောက်ပြီး သိမ်းဆည်းထားပါ။
တစ်နေ့ နားလည်လာတဲ့အခါ ... သို့မဟုတ် Xiaomi Devices အားလုံးကို
Mi Flash Unlock Tool ဖြင့် Bootloader Unlock ပြုလုပ်နည်းကို အရေးပေါ်လာ
လိုအပ်လာတဲ့အခါ အလွယ်တကူ လေ့လာလို့ရအောင်ပေါ့ဗျာ
Mi Flash Unlock Tool ကိုတော့ ကျနော် India Developer ကရေးဆွဲထားတာပါ၊ တကယ်လည်း
ကောင်းမွန်လှပြီး Stable ကျလွမ်းလှပါတယ်၊ ဆိုင်သမားများအတွက် တကယ်ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်
တကယ်လို့ သင့်ဖုန်းက Xiaomi Devices သာဖြစ်နေခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့
ယခုဖေါ်ပြပါ နည်းလမ်းကို အထူးလေ့လာထားသင့်ပါတယ်၊ သိနေခဲ့ရင်
မလိုအပ်တဲ့ ငွေထွက်ပေါက်လေး တစ်ခုကို အလိုလို ပိတ်ဆီးထားမိရာ ကျနေမှာပါ။
ယခုဖေါ်ပြပါ Bootloader Unlock ပြုလုပ်နည်းသည်
Fastboot Mode ဖြင့် ပြုလုပ်နည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
၁။ ဖုန်းကို Bootloader Unlock ပြုလုပ်ခြင်းသည်
Phone Warranty ကိုပျက်စီးတတ်ပါတယ်။
၂။ ဖေါ်ပြနည်းလမ်းသည် Xiaomi devices အတွက်သာဖြစ်ပါတယ်။
၃။ သင့်ဖုန်းက damage ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့ ဇူးနစ်(နည်းပညာ) မှတာဝန်မယူပါ။
၄။ ဖုန်းကို ကြိုတင်ပြီး Backup ပြုလုပ်ထားပါ။
၅။ ဖုန်းဘက်ထရီအား အနည်းဆုံး 50-60% charge နှုန်းရှိရပါမည်။
Download ADB Tool.zip
၁။ Mi Flash Unlock Tool ကိုဒေါင်းလော့ရယူလိုက်ပါ။
၂။ ကွန်ပျူတာတွင် MiFlashUnlock.exe ကိုထည့်သွင်းပြီးရင် ဖွင့်လိုက်ပါ။
၃။ အောက်ပါပုံအတိုင်း မြင်နေရရင်တော့ Agree ကိုနှိပ်ပါ။
၄။ အောက်ပါပုံအတိုင်း ရောက်လာခဲ့ရင်တော့ Mi Account အသင့်ရှိနေရင်
login ၀င်လိုက်ပါ၊ မရှိသေးရင်တော့ Create ပြုလုပ်လိုက်ပါ။
၅။ အကောက်ကို login ၀င်ပြီးရင်တော့ အောက်ပါစာကြောင်းအတိုင်း
Mesaage တစ်ခု ကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။
“You don’t have the permission to Unlock the device”
၆။ Your device ins't supported by MI Unlock ဆိုပြီးမြင်နေရရင်လည်း
Go ကိုနှိပ်လိုက်ပါ၊ သို့တည်းမဟုတ် အောက်ပါလင့်တွင်သွားလိုက်ပါ။
Go to MIUI Unlock page
၇။ Unlock ပြုလုပ်အတွက် permission ရပြီးရင်တော့ Unlock Now ကိုနှိပ်ပါ။
၈။ အောက်ပါပုံအတိုင်း အဆင့်ရောက်ခဲ့ရင်တော့ လိုအပ်မည့် Info ကိုအပြည့်အစုံ
ဖြည့်လိုက်ပြီး အားလုံး အသင့်ဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ I confirm that I have စသည်ဖြင့်
ပါသည့် နေရာမှာ အမှန်ခြစ်ပေးပြီး Apply Now ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
၉။ ဖုန်းသို့ OTP Code လေးရောက်လာပါလိမ့်မယ်။
၁၀။ ပို့ပေးလာတဲ့ OTP Code များကို ထည့်ပေးပြီး Next ကိုနှိပ်ပါ။
၁၁။ OTP password ဖြင့် တင်သွားခြင်း အောင်မြင်ကြောင်း
အဆင်ပြေသည့်ဟု အောက်ပါပုံအတိုင်း မြင်နေရရင်တော့ အဆင်ပြေပါပြီ။
၁၂။ ဒီတစ်ခါ ကွန်ပျူတာတွင် ရှိသည့် Mi Flash tool သို့ပြန်သွားလိုက်ပါ။
၁၃။ Mi Account ကိုပြန်လည် login ၀င်လိုက်ပါ။
၁၄။ အောက်ပါပုံအတိုင်း Unlock ပြုလုပ်ရန်အတွက် အသင့်ဖြစ်နေပါပြီ။
၁၅။ ဖုန်းကိုပါဝါပိတ်ပြီး Vol Down + Power များကိုတွဲနှိပ်ပြီး ဖုန်းမှာ
Fastboot Mode သို့ဝင်လိုက်ပြီး USB ကြိုးဖြင့် ချိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါ။
၁၆။ ဖုန်းနဲ့ ကွန်ပျူတာ ချိတ်ဆက်မှု အဆင်ပြေပြီး Phone conneted ဆိုပြီး
ပြနေခဲ့ရင်တော့ Tool မှ Unlock ဆိုတာကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
၁၇။ Unlocking process ပြုလုပ်နေတုန်း ပြီးဆုံးအောင်စောင့်နေလိုက်ပါ။
၁၈။ အောက်ပါပုံအတိုင်း Unlocked successfully ဆိုပြီးမြင်နေရရင်တော့
သင့်ဖုန်းကို Bootloader Unlock ပြုလုပ်ခြင်း အောင်မြင်ပါပြီ။
၁၉။ ဖုန်းမှာ Auto Reboot ကျပြီး ပြန်တက်လာပါလိမ့်မယ်။
၂၀။ သေချာသွားအောင်လို့ ဖုန်းကို ပါဝါပိတ်ပြီး Vol Down + Power များကို
တွဲနှိပ်ပြီး ဖုန်းမှာ Fastboot Mode သို့ဝင်လိုက်ပြီး USB ကြိုးဖြင့် ချိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါ။
၂၁။ ဒီတစ်ခါ Fastboot Command box ကိုဖွင့်လိုက်ပြီး အောက်ပါစာကြောင်းများကို
ရိုက်ထည့်ပြီး စစ်ကြည့်လိုက်ပါ၊ စာကြောင်း တစ်ကြောင်းပြီးတိုင်း Enter ကိုခေါက်ပါ။
၂၂။ အောက်ပါပုံအတိုင်း Device Unlocked: ture ဆိုပြီး မြင်နေရရင်တော့
သင့်ဖုန်းကို Bootloader Unlock ပြုလုပ်ခြင်း အားလုံးပြီးဆုံးပါပြီ။
အောက်မှာတော့ Youtube ကလင့်တစ်ခုညွှန်ပေးထားပါတယ်
Unknown Adobe Photoshop No comments
Memory Stick ပြုပြင်နည်း...
Unknown Computer, Memory No comments
ဒီတစ်ခါတော့လူသုံးလည်းများ အပျက်လည်းများတဲ့ Memory stickတွေအကြောင်းကိုကျနော်သိတာလေးတွေကို ပြန်ပြီး မျှဝေလိုက်ပါတယ်
★Download Bootice (100KB)★
★Download TestDisk (1.44MB)★
Root APK - ကွန်ပျူတာမလိုဘဲ Root လုပ်နိုင်သော Application များ စုစည်းမှုလေးပါ
Unknown Android Phone, Root No comments
မိတ်ဆွေများကို ကွန်ပျူတာမလိုဘဲ ဖုန်းထဲမှာ Install လုပ်ပြီး Root နိုင်တဲ့ Apk တွေကို စုစည်းတင်ပေးလိုက်ပါတယ်.. ဖုန်းအားလုံးကို Root လို့တော့ ရနိုင်မှာမဟုတ်ပေမယ့် အန္တရာယ်ကင်းတဲ့ Root apk တွေဖြစ်ပါတယ်..
I've Android Applications that can root android phones to give you. These Apps are installed and can root your phones without error but not all android phones.
ပါဝင်တဲ့ apk တွေကတော့ -
Universal Sala Root
ကွန်ပျူတာ-ဖုန်း ဆိုင် ရာ တန်ဖိုး မဖျက် နိုင် သော pdf များ
Unknown Ebook No comments
ကိုပေါက် – Google Sketchup https://docs.google.com/open?id=0ByoybHO2EueJdHBoekx2ci0yRW8
၀င်းဟိန်း – Basic Android https://docs.google.com/open?id=0B9UcDHcVpAz6dkpXYUlMX2RIdXM
သန်းထိုက် – idevice လက်တွေ့အသုံးချနည်း https://docs.google.com/open?id=0B9UcDHcVpAz6aV9kWjduRmJ5VUE
သန်းထိုက်(ရွှေရိပ်) – ရိုးသားစွာထိုးထွင်းလေ့လာခြင်း Honest Hacking https://docs.google.com/open?id=0B9UcDHcVpAz6WUxZNGxtcU5HSnM
သန်းထိုက်(ရွှေရိပ်) – Android ပေါ်မှ လက်တွေ့သုံးနည်းပညာ https://docs.google.com/open?id=0B9UcDHcVpAz6eGhTZERiZ0xOZmM
သရ – ၀င်းဒိုး(၈) အသုံးပြုနည်း https://docs.google.com/open?id=0B9UcDHcVpAz6aGN6WU1PZ0tSWjQ
စုကြည်တွေး – Facebook ၏လုပ်ဆောင်ချက်များ https://docs.google.com/open?id=0B9UcDHcVpAz6aTU2TzNVVTZrYVU
Android Application.Development for For Dummies.pdf https://docs.google.com/open?id=0B9UcDHcVpAz6TDhIYTNTVjQzQjg
နေဇော်ဝင်းမောင် – 3D STUDIO MAX စတင်လေ့လာသူများအတွက် https://docs.google.com/open?id=0B9UcDHcVpAz6OUFmVDBhRjV3V0U
တင်ဦး – အခမဲ့ဝက်ဆိုက်ရေးနည်း တင်နည်း https://docs.google.com/open?id=0ByoybHO2EueJWV9TSHI1aFdxRWc
အာကာဖြိုး – မိုဘိုင်းမျိုးစုံ Root လုပ်နည်းနှင့် အခြေခံလိုအပ်ချက်များ https://docs.google.com/open?id=0B9UcDHcVpAz6SlVNWGd6bEs1QXc
သန်းထိုက်(ရွှေရိပ်) – မိုလ်ဘိုင်းနည်းပညာ https://docs.google.com/open?id=0B9UcDHcVpAz6SVE0SUEtbGkxNWM
Photoshop effects2(မြန်မာ) https://docs.google.com/open?id=0B7HZIUBvCH1EMmZKS1k0czd1R1U
e-mail server (မြန်မာ) https://docs.google.com/open?id=0B7HZIUBvCH1ENFNKdGNtYU5vdmc
Small Office or Home Office Network (မြန်မာ) https://docs.google.com/open?id=0B7HZIUBvCH1ENmhVZlljeHFQVUU
Streaming Server (မြန်မာ) https://docs.google.com/open?id=0B7HZIUBvCH1EODNYaWRfdG95NlE
Video Conferening Server (မြန်မာ) https://docs.google.com/open?id=0B7HZIUBvCH1EOGR6R0tmUGUxLXc
Windows 2000 Server (မြန်မာ) https://docs.google.com/open?id=0B7HZIUBvCH1EOV9CdEJBTlFyaVE
Photoshop (မြန်မာ) https://docs.google.com/open?id=0B7HZIUBvCH1EOWlseUMwN0pKUDA
Hardware (ကွန်ပျူတာ) https://docs.google.com/open?id=0B7HZIUBvCH1EQ1NsSS1sUUJQNjQ
Word (မြန်မာ) https://docs.google.com/open?id=0B7HZIUBvCH1EQjRPY1RlLXZ3UkE
AccessXP (မြန်မာ) https://docs.google.com/open?id=0B7HZIUBvCH1EQl9kQlkwbkNCU2s
Hardware & DataCommunicationNetwork (မြန်မာ) https://docs.google.com/open?id=0B7HZIUBvCH1EQnZyNzZZM05YVXM
PowerpointXP (မြန်မာ) https://docs.google.com/open?id=0B7HZIUBvCH1ERVdUYWZVR3pIelk
DataConnection (မြန်မာ) https://docs.google.com/open?id=0B7HZIUBvCH1ERmlTbXlCT2JPZ28
Basic Windows & MicrosoftWord (မြန်မာ) https://docs.google.com/open?id=0B7HZIUBvCH1ES3hLSVAyQU90SFE
MS WordXP (မြန်မာ) https://docs.google.com/open?id=0B7HZIUBvCH1ES3pjRVNzajRJWms
Acrobat (မြန်မာ) https://docs.google.com/open?id=0B7HZIUBvCH1ESmdITGV1VHJ1RTg
bloghelpdeskbook (မြန်မာ) https://docs.google.com/open?id=0B7HZIUBvCH1ET25CR2N1MlY3d0E
FrontpageXP (မြန်မာ) https://docs.google.com/open?id=0B7HZIUBvCH1ETVZWblpGV0pGQnM
Content Management System(dynamic web portal) (မြန်မာ) https://docs.google.com/open?id=0B7HZIUBvCH1EUURUWXR4T3FDdW8
Protecting from Network Threats (မြန်မာ) https://docs.google.com/open?id=0B7HZIUBvCH1EUUZ5ZWZ6cU1xZnM
Linus OS (မြန်မာပြန်) https://docs.google.com/open?id=0B7HZIUBvCH1EUlphQXI3RDNQc2M
MS ExcelXP (မြန်မာ) https://docs.google.com/open?id=0B7HZIUBvCH1EVDlLNXdwaU9qRGc
Win2003 DHCP (မြန်မာ) https://docs.google.com/open?id=0B7HZIUBvCH1EVnFrajR6T0ZTbjg
DNS Server (မြန်မာ) https://docs.google.com/open?id=0B7HZIUBvCH1EVzF5dDB6RDdmQnc
Networking edition1 (မြန်မာ) https://docs.google.com/open?id=0B7HZIUBvCH1EWEFFNzhTMThKWkE
VisualBasic6.0 (မြန်မာ) https://docs.google.com/open?id=0B7HZIUBvCH1EWGZ5UFZwZXRfRVE
Apache WEB Server (မြန်မာ) https://docs.google.com/open?id=0B7HZIUBvCH1EWUhBWU1uSENHams
PM7 (မြန်မာ) https://docs.google.com/open?id=0B7HZIUBvCH1EY0NWbW54YXFVZjQ
Computer Knowledge Book (မြန်မာ) https://docs.google.com/open?id=0B7HZIUBvCH1EamRhd0ltbms4V2M
Autocad 2002 (မြန်မာ) https://docs.google.com/open?id=0B7HZIUBvCH1EbFRxd1JqaVc5WmM
TurboC (မြန်မာ) https://docs.google.com/open?id=0B7HZIUBvCH1EbFpFRDhMLWEycEU
Making aBlog.pdf (မြန်မာ) https://docs.google.com/open?id=0B7HZIUBvCH1EbG1DQnhWUTY0OW8
vnc (မြန်မာ) https://docs.google.com/open?id=0B7HZIUBvCH1EbjhqT185ellGZGM
Dynamic Host Configuration Protocol (မြန်မာ) https://docs.google.com/open?id=0B7HZIUBvCH1EbkM3OGVtNkllTDg
WEB Design (မြန်မာ) https://docs.google.com/open?id=0B7HZIUBvCH1Ec1hjQmlESHNFM00
windows installation (မြန်မာ) https://docs.google.com/open?id=0B7HZIUBvCH1EcHdpaHV2VlNac28
Streaming (Unreal) Server (မြန်မာ) https://docs.google.com/open?id=0B7HZIUBvCH1Eclg5d0VEeEptdE0
hardisk (မြန်မာ) https://docs.google.com/open?id=0B7HZIUBvCH1EdERXU3NrNmM1a3c
NetMeeting3(မြန်မာ) https://docs.google.com/open?id=0B7HZIUBvCH1EdThVTGZuXzRxb28
PhotoShop effects (မြန်မာ) https://docs.google.com/open?id=0B7HZIUBvCH1EdUR2Y0R2OVV5LXc
mail server & client (မြန်မာ) https://docs.google.com/open?id=0B7HZIUBvCH1EdUROWGZsUkFBdXc
LearningWebDesign (မြန်မာ) https://docs.google.com/open?id=0B7HZIUBvCH1EdUhrR1dTaWdqX0E
HTML (မြန်မာ) https://docs.google.com/open?id=0B7HZIUBvCH1EeDJJMjRXejZMSm8
Credit : AC Vs DC
♪ အီးမေးလ် ဟတ်ခံရခြင်းမှ ကာကွယ်နည်းများ ♫
Unknown Gmail No comments
ကျတော်တို့ ပြည်တွင်းမှာ အသုံးများတဲ့ မေးလ် အနေနဲ့ ဂျီမေးလ်ကိုတွေ့ရသည့် နည်းတူစွာ အီးမေးလ် ဟတ်ခံရခြင်းနောက် ဘာတွေ ပြန်လုပ်ဖို့ လိုသလဲဆိုတာ။
မြင်တွေ့နေရတဲ့ အတိုင်းပဲ Facebook အကောင့်တွေကိုလည်း ဂျီမေးလ်တွေနဲ့ အများဆုံး ၀င်ကြတာမို့ အကောင့်တစ်ခုကို ဆုံးရူံးတာနဲ့ နောက်တစ်ကောက်ကိုပါ ပါနိင်ပြီး လက်လွယ်စပယ် ဆုံးရူံးရတာဟာ ဘယ်ဘက်ကကြည့်ကြည့် ကောင်းတာကို မတွေ့ရတာမို့ ဟတ်ခံနေရတဲ့ အနေအထားမှာ ကျရောက်နေ တဲ့သူတွေအတွက် အတတ်နိင်ဆုံး ပြန်လည် လုပ်ဆောင် ရယူနိင်မဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကို ဖော်ပြလိုက် ပါတယ်။
Viber ( Pc ) မှာမြန်မာလိုရပြီး Firefox , Facebook , Gmail တွေမှာမြန်မာလိုမပေါ်ခဲ့ရင်ဖြေရှင်းနည်း
Unknown SOFTWARE, Viber No comments
ပုံ1.. မှာပြထားတာကတော့ Firefox ကနေ>> Tool >> Option >> Content >> font and color >> ရောက်ရင် Advanced ကိုနှိပ်လိုက်ပါ။
ပုံ2.. ပေါ်လာတဲ့ဘောက်ကနေ နံပါတ်1 ပြထားတဲ့အတိုင်း အမှန်ချစ်လေး ဖြုတ်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင်
Ok နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ ပြီးရင် Firefox ကိုပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်လိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင်တော့ Viber မှာတော့မြန်မာလိုအဆင်ပြေသွားပါပြီ။
Unknown SOFTWARE, Viber2comments
Unknown Computer, နည်းပညာ No comments
သူတစ်ပါး၏ Facebook ကို Password မသိဘဲ ခိုးသုံးနည်း |
Unknown Facebook, နည်းပညာ No comments
Window Loader (1)
+Microsoft Word 2010 ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနည်း စာအုပ်+
Excel 2013 ကို ကျွမ်းကျင်စွာ အသုံးပြုနည်း စာအုပ်.....
Huawei U8825D Root & Myanmar font ထည့်နည်း
''Ubuntu Beginner Guide (မြန်မာလို)'''
ဆိုက်ကဖေးနှင့် ရုံးများအတွက် အကောင်းဆုံး အင်တာနက်ကွန်နက်ရှင်ဖြန့်ဝေမှု (Linux Server).....
Internet Download Manager ( IDM ) 6.35 Build 1 Full Version
Copyright @ 2013 Nyi Thawe.